China Acrylic mgbasa ozi na-azọpụta ike ọkụ igbe akara ndị na-emepụta na ndị na-ebubata |Zhengcheng
Họrọ akụrụngwa dị elu, nke ndị na-emepụta ihe mere, jikwaa ịdịmma nke ọma, akara dị elu na ọmarịcha ihe ngosi, wee mepụta ọmarịcha ihe oyiyi.
Aha ngwaahịa: Mgbasa ozi acrylic na-echekwa igbe ọkụ
1. Ọnụ ego ntinye ego mbụ nke ịmepụta akara ngosi nkịtị dị ntakịrị, n'ihi na a na-ejikarị ogwe acrylic emegharịrị ihe ndị a.Otú ọ dị, ogwe ndị ahụ ga-adapụ, deform, dent na nsogbu ndị ọzọ n'ime ọnwa 3 ruo 5, nke na-ebelata ọrụ nke ihe ịrịba ama ahụ nke ukwuu.
2. Na mmepụta igbe ọkụ ọdịnala, a na-ejikarị chloroform dilute gluu na-ejikọta swatches na panels.Arụ ọrụ mkpuchi adịghị ike, ọ na-enwekwa ike inwe mmetụta nke okpomọkụ na ihe ndị na-emegharị emegharị na-eme ka ọkpụkpụ.Uzuzu na unyi ga-adị mfe ịnakọta na swatches na panel mgbe mmiri ozuzo sachara ya.Ya mere, a pụghị ihicha uzuzu na unyi, ha ga-emetụtakwa mmetụta ọkụ nke akara ngosi yana imebi ọdịdị nke akara ngosi.
3. A na-ahazi igbe ọkụ ọdịnala dịka akụkụ nke saịtị ahụ si dị.Ọ bụrụ na ụlọ ahịa ahụ na-aga, ọnụego ojiji bọọdụ izizi erughị 5%.
Nsogbu ndị zhengcheng doziri
1. Nabata bọọdụ acrylic nke Japan na-ebubata, nkwụsi ike dị elu, elu dị larịị na nnyefe ọkụ siri ike.Mgbe ejiri ya na tubes LED, ọkụ ahụ bụ otu.N'otu oge ahụ, ihe a na-eguzogide ọgwụ ultraviolet radieshon, ọ dịghị mfe ịgbaze, ọ dịghị mfe nrụrụ, na-enwe ogologo ndụ ọrụ.
2. Mpempe akwụkwọ ọkụ nke Zhengcheng nwere ọtụtụ igbe ọkụ, nke dị mfe ịwụnye.Na mgbakwunye, enwere ike ịwụnye ya ma jiri ya mee ihe mgbe ebufere ụlọ ahịa ahụ.
Nke gara aga: Bọdụ nrịbama na-enwu n'èzí maka ihe nri
Osote: Ihe nrịbama ụlọ ahịa dị mma maka Yonghui
Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Igbe nrịbama nke mpụga, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Akara ngosi, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Ihe nrịbama ụlọ ahịa,